Kusuma Chikamu 3 | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Makore akazotevera pashure pemafashamo, Bhaibheri rinotiudza nezvevanhu vashomanana vakashumira Jehovha. Mumwe wacho aiva Abrahamu uyo akanzi ishamwari yaJehovha. Nei akazonzi ishamwari yaJehovha? Kana uri mubereki, batsira mwana wako kuti aone kuti Jehovha anomuda uye anoda kumubatsira. Kungofanana naAbrahamu nevamwe vaiva vakatendeka vakadai saRoti naJakobho, tinogona kusununguka kukumbira Jehovha kuti atibatsire. Tinogonawo kuva nechivimbo chekuti Jehovha acharamba achizadzisa zvese zvaanovimbisa.
Ita zvese zvaunonzi naJehovha uite, kunyange pamwe pacho zvisiri nyore
Kuva shamwari yaMwari kunokosha kudarika chero chii zvacho
Jehovha anoda kuti tiregerere vamwe uye tikurumidze kuyanana kuti pave nerugare
Vamwe vanhu vakafunga kuvaka guta raiva neshongwe yaisvika kumatenga chaiko. Nei Mwari aita kuti vangoerekana vava kutaura mitauro yakasiyana?
Nei Abrahamu naSara vakatengesa zvinhu zvavaiva nazvo muguta, kuti vanogara sevanhu vaingotama-tama kunyika yeKenani?
Mwari aizozadzisa sei zvaakavimbisa kuna Abrahamu? Vimbiso yacho yaizozadzika nekuna ani, Isaka here kana kuti Ishmaeri?
Mwari akanayisa moto nesarufa kuSodhoma neGomora. Nei maguta iwayo akaparadzwa? Nei tichifanira kuyeuka mudzimai waRoti?
Akaratidza Kuti Aiva Nekutenda
Mwari akati kuna Abrahamu: ‘Tora mwanakomana wako mumwe chete, umupe sechibayiro pagomo riri kunyika yeMoriya.’ Abrahamu aizoita sei paaizosangana nemuedzo uyu wekutenda?
Jakobho Anowana Nhaka
Isaka naRibheka vakava nevanakomana vaiva mapatya vainzi Isau naJakobho. Isau ndiye akatanga kuberekwa saka ndiye aiva nekodzero yekuwana nhaka yaikosha. Nei akatengesa nhaka yake kuti angowana ndiro yenyemba?
Jakobho naIsau Vanotangazve Kuwirirana
Jakobho akaita sei kuti awane chikomborero kubva kungirozi? Uye akaita sei kuti vatangezve kuwirirana naIsau?